တူသောအကျိုး ပေးသင့်သလား – MoeMaKa Burmese News & Media
ကျွန်မ စာမရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ ခေါင်းထဲမှာ တွေးနေမိပြီး၊ စိတ်ထဲမှာ ရေးချင်နေတာတွေကတော့ အများကြီးပါ။
ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုတာဝန်မပေးပါပဲလျှက်၊ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ချင်လို့ လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အလုပ်တခုက သြဂုတ်လကတည်းက အလုပ်များနေ လိုက်တာ အောက်တိုဘာလဆန်းအထိပေါ့။
အခုတော့ အားပြီဆိုကြပါစို့။ အချိန်လေး နည်းနည်းရလာပြီဆိုတော့ စာရေးဘို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ရေးချင်နေတာတွေက အများကြီး။ ရေး လက်စ၀တ္ထုရှည်လေးကိုလည်း ဆက်ရေးချင်သေးတယ်။ အရင်ရက်ပိုင်းတွေကတည်းက ခေါင်းထဲတ၀ဲဝဲလည် ရေးနေမိတာတွေလဲ လက် က ချရေးချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် မပြုမဖြစ် ပြုချင်တဲ့၊ ပြုရမယ့်ကိစ္စလေးတွေကလည်း ရှိပြန်သေးတယ်လေ။ တနယ်တကျေးကလာလည်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းကို တွေ့ဆုံဧည့်ခံဘို့၊ တပြည်တရွာက ကြွလာတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်တရားပွဲကို သွားဘို့၊ မွေးရပ်မြေကိုပြန်တော့မယ့် ကိုကျော်သူကို နှုတ်ဆက် ဘို့။
ဒါနဲ့ ကိုကျော်သူနှုတ်ဆက်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်၊ သောကြာနေ့ ညနေမှာရောက်သွားတယ်။
ချိုသင်းတို့ မေတ္တာရိပ်မြုံဂေဟာလေးကို ရောက်သွားတော့ ခြံထဲရော၊ လမ်းမပေါ်မှာပါ ကားရပ်စရာနေရာမရှိတော့။ ကားတွေက အပြည့်။ ဒါနဲ့ပဲ တပွဲထဲလာကြတဲ့လူအချင်းချင်း၊ ပြန်သူရှိမှ ကားဖယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အရင်ရောက်သူတွေကားအနောက်ကနေ ပိတ်ကာရပ်လိုက် ရ တယ်။
အိမ်ထဲမှာလည်း လူအပြည့်။ အိမ်တဘက်ခြမ်းမှာ အမျိုးသားတစု စကားကောင်းနေသလို၊ တဘက်ခြမ်းမှာတော့ ကျားကျား မမ အရွယ်စုံက ကာရာအိုကေ သံပြိုင်ဆိုနေကြတယ်။ ပျော်စရာကြီးပေါ့။
အိမ်အတွင်းထဲ ထမင်းစားခန်းဆီသွားပြီး ကိုကျော်သူနဲ့ နှုတ်ဆက်စကားပြော။ ဘိတ်ကပ်ကျေးကိုက် ခေါက်ဆွဲကြော်ကို သူလဲစား၊ ကိုယ် လဲစား။ ကိုကျော်သူခမြာမှာတော့ ခေါက်ဆွဲတပုဂံ ဖြောင့်ဖြောင့်မစားရ။ တယောက်ပြီးတယောက် လာနှုတ်ဆက်သူတွေနဲ့ စကားပြောရတာ မနားရအောင်ပါပဲ။
ကိုယ်ကလဲ ပူပူနွေးနွေးပြီးထားတဲ့ ပွဲအပြီးကတည်းက မဆုံရသေးတဲ့ပွဲ။ လုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့ ပွဲအကြောင်းတွေ စမြုံ့ပြန်ကြ၊ ကောင်းကွက်ကလေးတွေ ပြန်ပြောကြ၊ ချွတ်ချော်သွားခဲ့တာတွေကို သင်္ခန်းစာယူနိုင်ဘို့ ပြန် သုံးသပ်ကြပေါ့။ အများစုကတော့ ကိုယ့်လိုပါပဲ၊ ဆယ်ရက်ကျော် ကြာနေတာတောင် ပျော်လို့ မ၀သေးပုံပဲ။ ပွဲအကြောင်း စကား စလိုက်တာနဲ့ အပြုံးတွေ ၀င်းလက်သွားတဲ့ မျက်နှာတွေပဲ မြင်ရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖန်သားမျက်နှာပြင် အပေါ်မှာ မဟုတ်၊ ပုံနှိပ်စာရွက် အပေါ်မှာ မဟုတ်ပဲ လူကိုယ်တိုင် မြင်လိုက်ရတာကို ပြန်တွေး တွေးပြီး ပျော်နေကြဆဲ။ နှစ်သိမ့် ပီတိ ဖြစ်လို့ မ၀ကြသေး။ နှစ်ရှည်လများ ခွဲခွာနေခဲ့ရတဲ့၊ စိတ်ကူးနဲ့ လွမ်းနေ၊ တမ်းတနေရတဲ့ အမေ့ကို လူကိုယ်တိုင် မြင်ခွင့် တွေ့ခွင့် ရလိုက်တဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ ၀မ်းသာမှု ခံစားချက်မျိုးဆိုတာ လူတိုင်းလိုလို ပြောသလို၊ ပြောသူကိုလဲ ငြင်းသူ နည်းပါတယ်။
ပွဲမှာ တင်စားပြောခဲ့သလို ဒါ ကျွန်မတို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေ။ ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ အမေ့ကို ပြန် တွေ့ရခြင်း။
အချိန်နည်းနည်းကြာလာတော့ အိမ်တဘက်ခြမ်းက အမျိုးသားဝိုင်းကလဲ ရေချိန်တက်လာသလို၊ ကာရာအိုကေ ၀ိုင်းကလဲ အရှိန်တက်လာ ပါတယ်။
ကိုကျော်သူကတော့ အိမ်နောက်ဖေး အခန်းထဲမှာ ပြောဆိုနေဆဲ၊ အလုပ်များဆဲ။ သူ့ကို နှုတ်ဆက်သူတွေနဲ့ အလုပ်ရှုတ်ဆဲ ပဲ။ သူ့ခမြာ ဘယ်ဝိုင်းမှာမှ မပါနိုင်ရှာဘူး။
ကျွန်မတို့ စကားကောင်းနေတုန်း ဘယ်က ဘယ်လို စလာတယ် မသိ။ နယ်က လာတဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်က ကျွန်မတို့ကို သီချင်းဆိုဘို့ အတင်း လာခေါ်တယ်။
မဆိုတတ်ပါဘူး ပြောလဲမရ။ တဦးချင်း မဆိုချင်ရင် စုံတွဲ ဆိုရမယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် မရှိဘူး ပြောတာကို လက်မခံပဲ ဘယ် သီချင်းလဲ၊ ဘာ သီချင်းလဲ အတင်း ကပ်မေးနေတာမှာ ခေါင်းထဲ ဖြတ်ကနဲ ၀င်လာတဲ့ ခေါင်းစည်းကလေးကို ပြောလိုက်မိတယ်။
“သည် သီချင်းရဲ့ မူလ လက်ဦး သီချင်းအမှန်ကို သိသလား” တဲ့။ လူငယ် လေး ငါးယောက်လောက် ရှိတာ တယောက်မှ မသိကြပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက ၀င်ဖြေလိုက်မိတယ်။
“Dawn ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က Tony Orlando ဆိုထားတဲ့ ‘Tie A Yellow Ribbon’ သီချင်း။ ကြာလှပြီ။ အဲသည် သီချင်း ပေါ်တုန်းက အန်တီတို့တောင် ကလေးဘ၀ ဆယ်ကျော်သက်လောက် ရှိသေးတာ။ 1970 လောက်က ထင်တယ်”
ခဏနေတော့ ချိုသင်းက အမရေ လာ၊ လာ ဆိုပြီး အတင်းလှမ်းခေါ်လို့ အိမ်ရှေ့ဘက် ထွက်လာခဲ့တယ်။
လူ အများ ကြားဘူးကြမှာပါ။ မြူးကြွတဲ့ ဂီတ တီးလုံးနဲ့ သည်သီချင်းလေးကို။ အိမ်အပြန်မှာ သစ်ပင်ပေါ်မှာ ဖဲကြိုးဝါ ချည် ထားတာ တွေ့ရင် ချစ်တယ် အဖြေ ရမယ်ဆိုတာ။ ဗမာလို စာသားထည့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စတီရီယို ကော်ပီ သီချင်းမှာ သီချင်းတေးသွားနဲ့ လိုက်ဘက်အောင် ချစ်ကြောင်း အဖြေတောင်းတာကို ထည့်စပ်ထားပေမယ့် တကယ့် မူရင်းသီချင်းကတော့ အဓိပ္ပါယ် နည်းနည်းလေး ကွာပါတယ်။ အဝေးကနေ အိမ်ပြန်လာတာကို လက်ခံဦးမှာလား မေးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် စတီရီယို ကော်ပီသီချင်းရေးခဲ့တဲ့သူကလည်း အရည်အချင်းခေသူ မဟုတ်ပါဘူး။ စာသားပြည့်ရင် ပြီးရော ဆိုပြီး သီချင်းသွားနဲ့ လိုက်ဘက်အောင် စာသားတွေ အသလွတ် ထည့်ရေးထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ အမှတ်မမှားရင်တော့ ပုသိမ် မောင်စိမ်းသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (မှားခဲ့ရင်လဲ အမှန်သိသူများ ပြင်ပေးပါ။)
‘အိမ်ပြန်အလာ တပေါင်းလ ချစ်စရာနွေ၊ ကြွေရွက်တွေ ၀ဲလို့ ဝေ့လည် နေကြတယ်’ ဆိုတဲ့ အဖွင့်စာသားကတင် အဓိပ္ပါယ် အပြည့် ပါ ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ နွေရာသီဆိုတာ အလွန် ပူပြင်းတဲ့ အချိန်။ သည်အထဲမှာမှ နွေရာသီ လေးလတာ မှာ မတ်လထဲ ကျတဲ့ တပေါင်းလ ဆိုတာ အပူဆုံးလ ပါ။ ဒါပေမယ့် အပူတောမှာ အိမ်ပြန်လာရချိန်ကို ချစ်စရာနွေလို့ ရေးစပ်ခဲ့ပုံက ရာသီတွေ ဘယ်လို ပူပြင်းပါစေ၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိရင် ချစ်စရာအချိန် ဖြစ်နေတာကို တင်စား ရေးစပ်ထားတယ် ထင်ပါတယ်။
မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို စပ်ထားတာမှာတော့ “I’m comin’ home, I’ve done my time” (ကျသင့်တဲ့ အချိန်ကို ပေးဆပ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတယ်) လို့ ဆိုထားတယ်။ တတိယ စာကြောင်းမှာ ‘I’d soon be free’ (မကြာခင်မှာ လွတ်မြောက်မယ်) လို့ သီကုံးထားတော့ ထောင်က အပြန်လမ်းကို ဆိုလိုတာလား၊ စစ်ပွဲမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အိမ်ပြန်လာတာလား။ သေချာတာ ကတော့ အခြေအနေအရ ခွဲခွာချန်ထားခဲ့ရတဲ့ အချစ်ဟောင်းကို သူ့ကို ပြန်လက်ခံမယ် ဆိုရင် ဖဲကြိုးဝါလေးကို ၀က်သစ်ချပင်အို မှာ ချည်ထားပေးဘို့၊ တောင်းဆိုထားတဲ့ အဖြစ်ပါ။
သည်သီချင်းလေးထဲကလို သစ်ပင်တွေမှာ၊ ခြံစည်းရိုးတွေမှာ၊ အိမ်တိုင်တွေမှာ၊ ပြူတင်းပေါက်ဘောင်တွေမှာ ဖဲကြိုးဝါ ချည်တဲ့ ဓလေ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လူသိများ၊ လုပ်ဆောင်သူ များခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် အမေရိကားမှာ ဆိုရင် ဗီယက်နာမ် စစ်ပွဲအပြီးမှာ နှစ်လရှည်ကြာစွာ ချစ်သူ ရည်းစား၊ ဇနီးမယားနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရသူတွေ အိမ်အပြန်မှာ သူတို့ရဲ့ ကြင်သူတွေ ရင်ခွင်သစ်တွေ့သွားတာတွေကို ရင်နာစွာ တွေ့တတ် ကြုံကြရလို့၊ အိမ်ရှေ့မှာ ဖဲကြိုးဝါမတွေ့ရလျှင် အိမ်ထဲ မ၀င်တော့ပဲ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် လမ်းထိပ်ကနေ လှည့်ရှောင်သွားတဲ့ အဖြစ်တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့၊ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချို့က Dear John လို့ အစချီတဲ့ အဆက်ဖြတ်စာ၊ ကွဲကွာစာတွေ ကြိုတင် ရခဲ့ပေမယ့် တချို့ကတော့ စာမလာ၊ ဘာသတင်းမှ မကြားရ ပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်တွေကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဟာ ရင်ဝကို ဆောင့် အကန် ခံလိုက်ရသလို အလွန် အထိနာကြပါတယ်။
ရက်လရှည်ကြာစွာ စစ်မြေပြင်မှာ လောကငရဲ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံ ခံစားကျော်ဖြတ်နေစဉ်မှာ သူတို့အတွက် အသက်ရှင်သန်ဘို့ မျှော်လင့်ချက်က အိမ်အပြန်လမ်း တခုပါပဲ။ အိမ်မှာ စောင့်ကြိုနေမယ့်သူပါ။ ကျန်ခဲ့ ချန်ထားခဲ့ရသူရဲ့ အပြုံးမျက်နှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှသူများ ခမြာမှာတော့ …. … .. ။
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာလည်း အနောက်တိုင်းက နိုင်ငံတွေလို သည်လို ထုံးစံ လူသိမများခဲ့ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်၊ ၁၉၆၂ ကတည်းက သည်လို ဖဲကြိုးဝါ ချည်ပြီး ကြိုခွင့်ရရင် ကြိုချင်သူတွှေ အများကြီးရှိခဲ့မှာပါ။ အိမ်အပြန်လမ်း ကြိုချင် တွေ့ချင် တာတောင် မတွေ့ရနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်တွေလဲ ရှိကြမှာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ် ခွဲကြရတာကို ရဲရင့်စွာ ရင်ဆိုင်ပြီး ချစ်သူ၊ ကြင်သူ အပြန်လမ်းကို စောင့်ခဲ့သူတွေ၊ အဖေအမေ ပြန်အလာကို မျှော်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ၊ သားသမီး အပြန်လမ်းကို စောင့်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။
မနှစ်က သည်အချိန်မှာတောင် စိတ်ကူးမယဉ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်ပခရီးစဉ် တွေမှာ သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခွင့်တွေ ရနေကြပါပြီ။
သူမကို တွေ့လိုက်ရသူတိုင်းလိုလို နီးပါးက ထုတ်ဖေါ်မပြောပြတတ်လောက်အောင် ၀မ်းသာကြည်နူးကြရတယ် ပြောကြပါတယ်။ ရပ်ဝေးကနေ နှစ်ရှည်လများ သူမနဲ့ သူမတို့ အဖွဲ့ကို အားပေးထောက်ခံခဲ့သူတွေထံ အရောက်လာပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားတာပါဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူကိုယ်တိုင် တွေ့လိုက်ရတာဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေတဲ့၊ အမျှော်ကြီး မျှော် စောင့်စားခဲ့ရသူကို တွေ့ရသလို ပီတိဖြစ်ကြ၊ ပျော်ရွှင်ကြရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်လောက်ကစပြီး တဖွဲဖွဲ တစစ အိမ်က ထွက်သွားကြတဲ့ သားတွေ သမီးတွေထံက စာမလာ သတင်းမကြား ရတာကို အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကြောင့်ပါ၊ အခြေအနေ မပေးလို့ သတင်း မကြားရတာပါ။ အခြေအနေပေးရင် သူတို့ ဆက်သွယ်လာမှာပါ၊ တနေ့တော့ သူတို့ ပြန်လာမှာပါ ဆိုပြီး မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ယနေ့ချိန်ခါ မိအိုဘအိုတွေမှာ သတင်းစာတွေ စာစောင်တွေ အထဲမှာ သူများသားသမီးတွေ ပြန်လာတာ၊ သူများမိသားစုတွေ ပျော်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး ဘယ်နှစ်ယောက် ကြိတ် မျက်ရည် သုတ် နေကြမလဲ။
ကိုယ့်သား ကိုယ့်သမီး၊ ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတွေ ဘာဖြစ်သွားတယ်၊ ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ် တိတိကျကျ မသိကြသေးပဲ တနေရာရာမှာ အသက် ရှင်သန်နေသလိုလို၊ တနေ့မှာ အိမ်ဝက ဘွားကနဲ ပေါ်လာမှာလေလားနဲ့ မရေမရာ မျှော်လင့်ရတာက ဘ၀မှာ အပင်ပန်းဆုံး အလုပ်။ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိရတာက အဆိုးဝါးဆုံး ခံစားချက်ပါ။ ကြုံဘူးမှ သိကြမယ့် ဝေဒနာပေမယ့် သူများတွေ မကြုံစေချင်၊ မခံစားစေချင်ပါဘူး။
အား … ခေါင်းမှာ စည်းတဲ့ ဖဲကြိုးအ၀ါတွေ တပြုံကြီး၊ အများကြီး အများကြီး တွေ့တယ် …’
သီချင်းက အဆုံးသပ် နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကို ရောက်ပြီမို့ အခန်းထဲ သီဆိုကခုန်နေသူတွေ အားလုံး သံပြိုင် ၀ိုင်းအော် ကြပါတယ်။ အားရပါးရ တဟေးဟေး အော်သံတွေ ပျော်မြူးစွာ ထွက်လာသလို လက်ခုတ်သံတွေက တဖြောင်းဖြောင်း။
သူများတိုင်းပြည် နိုင်ငံမှာ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ဖဲကြိုးဝါချည်ပြီး စောင့်မျှော်ခဲ့သူတွေ၊ ဖဲကြိုးဝါ ဝေ့ယမ်းပြီး အဖေ အပြန်လမ်းကို စောင့်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ၊ ဖဲကြိုးဝါ ကိုင်ပြီး သားသမီးအပြန်လမ်း ကြိတ်မျှော်နေတဲ့ အဖေတွေ အမေတွေ ရှိသလို ဖဲကြိုးဝါ ကူချည် ပေးရင်း စောင့်ခဲ့တဲ့ အမတွေ၊ ညီမတွေ၊ အကိုတွေ၊ ညီတွေ ရှိမှာပဲ။ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေ အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိမှာပဲ။ တကယ်တော့ ချစ်သူ ဇနီးမယား အိမ်ထောင်ဘက်တွေတင်မက တဆွေလုံး တမျိုးလုံး၊ သိကျွမ်းခင်မင်သူတွေက အိမ်ပြန်လာသူတွေကို ကြိုဆိုခဲ့တာပါ။ ၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုကြတာပါ။
ခွဲချန်ထားခဲ့တဲ့ အမေ့ဆီ သူတို့ ပြန်မလာကြတော့ဘူးဆိုတာ စိတ်မကောင်းပေမယ့် အသိပေးကြပါ။ စောင့်နေသူတွေ သိသင့်ပါတယ်။
‘ယုဇနပင်နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ’ သီချင်းကို ဆိုသွားဘူးတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဖဲကြိုးဝါကို တွေ့ခွင့် မရတော့တာ စိတ် မကောင်းပါဘူး။
(၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်မှ စတင်ကာ မြန်မာပြည် အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာ လူမသိ၊ သူမသိ အိမ်ပြန်မလာနိုင်ကြသူများ၏ မိသားစုများ အတွက် ရည်ညွှန်းပါသည်။)
USက မြန်မာတွေ သမ္မတအတွက် မဲပေးပြီးပြီလား? (MoeMaKa) →
One thought on “တူသောအကျိုး ပေးသင့်သလား”